Kuongorora Yako Twitter Kutevera | Martech Zone
Chipiri, Zvita 27, 2011 Chipiri, Zvita 27, 2011 Douglas Karr
Schmap yakaburitsa Twitter nhoroondo yekuongorora chishandiso chakanyatso nzwisisika. Nekuita kuenzanisa kuongorora kwevateveri vako kune mamwe maakaundi, Schmap inogona kukupa iwe yakadzama ongororo yekuti vateveri vako vanobva kupi, ndeapi mabasa, ivo huwandu hwevanhu uye kunyangwe simba ravo. Iko kune yemahara yakakosha ongororo pamwe ne kuongororwa kuzere. Iko kuongororwa kwemitengo kunoenderana nerudzi rupi rweakaundi yauri kuongorora asi kubva pamadhora makumi maviri nemashanu kune asiri-wekushandisa mushandisi kusvika $ 25 kumakambani.
About Schmap: Schmap inzvimbo yehunyanzvi hwekupa sevhisi uye muparidzi wemuno, ane hunyanzvi hwekucheka pamharadzano yenzvimbo, yemagariro, yekutengesa uye yechokwadi-nguva webhu. Isu tinonyanya kuzivikanwa needu chaiwo-enguva maguta, uye yedu inozivikanwa Twitter sevhisi.
Heano mamwe akaverengerwa manhamba kubva kuzere kuongorora kwe @douglaskarr (iyo ichangopfuura vadzidzi zviuru makumi matatu!).
Ne Twitter Kufurira
Ne Twitter Chiitiko
Nenguva yakareba yavari pa Twitter
Nemhando dze Twitter Maakaundi avanotevera
Paive paine mamwe matanho zvakare, uye kuongororwa kwakadzama kunogona kutorwa seCSV. Kana iwe uri kuda kuona kuti uri kukwezva vateereri chaivo, ini ndinogona kukurudzira iwe kuti utenge iyo kuongororwa kuzere. Iyo data inoguma yandakatambira yakasimbisa zano rangu rekukwezva vateveri veTwitter uye ndinofara nemhedzisiro. Iyo chete nzvimbo yekunetsekana kwandiri yaive yekuti ini ndakanyora-indexed pane vateveri vechikadzi. Pamwe ndiko kungogara kurukova kwegeek kutaura ... zvirokwazvo rimwe basa rekuita.
Tags: schmapnetsons.itTwitterkuongorora kwe twittertwitter huwandu hwevanhutwitter mutevedzeri kuongororatwitter vateveri
Ndiani Ane Muridzi Wako Bhizinesi Twitter Vateveri?